OffLiberty, budata vidiyo na egwu ogologo na youtube na MP4 ma ọ bụ MP3 | Akụkọ akụrụngwa
YouTube Ọ ghọọla oge ọrụ Google kachasị ewu ewu na ebe ọtụtụ ndị ọrụ na-enwe ọtụtụ vidiyo kwa ụbọchị ma mgbe ụfọdụ na-enweghị ezumike. Site na egwu, rue isi nke usoro ọkacha mmasị anyị, site na monologues kacha mma na-atọ ọchị na ọbụna vidiyo nke ụfọdụ ndị na-ewu ewu kachasị ewu ewu n'ụwa, ụfọdụ n'ime ihe ndị anyị nwere ike ịhụ, mana ọ dị nwute na ọ bụghị azọpụta, ma ọ dịkarịa ala n'ụzọ gọọmentị kemgbe iji mezuo nke a anyị nwere ngwaọrụ ndị ọzọ dịka Emeghị ka nnwere onwe.
Na YouTube anaghị ekwe ka ọ zọpụta vidio ndị a na-akwado na sava ya. Agbanyeghị, taa enwere ike dị iche iche danloduo vidio YouTube na kọmputa anyị, mbadamba ma ọ bụ ama n'ụzọ dị mfe, na-enweghị nsogbu na n'ụzọ dị oke ọsọ.
1 Etu esi ebudata vidiyo YouTube ogologo na OffLiberty
2 Budata vidiyo na EaseUS MobiMover Free
2.1 Download vidiyo na naanị 2 nzọụkwụ
Etu esi ebudata vidiyo YouTube ogologo na Emeghị ka nnwere onwe
Emeghị ka nnwere onwe bu aha ngwa oru anyi choro igwa gi maka ta ta na nke ozo anyị nwere ike ibudata vidiyo YouTube na FLV ma ọ bụ MP3 usoro, na-enweghị itinye ihe omume ọ bụla na kọmputa anyị. Ngwaọrụ a nwere nnukwu uru anyị nwere ike ijikwa ihe niile na weebụ.
Na mbu, anyi aghaghi ibanye na OffLiberty, ebe anyi nwere ike ihu ihe yiri nke a, ya na otutu akwukwo, rue ihe a huru n’onyonyo a;
Ugbu a na ibudata vidiyo ọ bụla anyị kwesịrị fanye URL nke otu, ọ bụ ezie na n'ọtụtụ oge, nke a anaghị enyekarị nsonaazụ ezubere. Iji mee nke a, ọ kachasị mma ịnara adreesị anyị hụrụ na vidiyo ọ bụla iji nwee ike ịkekọrịta ya, nke dị n'okpuru nkọwa ahụ na n'akụkụ "Embed" na "Email". Ọ bụrụ na ịmaghị ebe ị ga - ahụ URL a na onyogho na - esote, anyị ga - akọwara gị ya n'ụzọ zuru ezu (ị ga - ahụ usoro ị ga - agbaso iji uhie);
Ozugbo anyị depụtaghachiri adreesị ahụ, anyị ga-ewe ya na OffLiberty na pịa bọtịnụ na-agbanyụ. Usoro nbudata ga-amalite ozugbo anyị pịa bọtịnụ ahụ anyị ga-ahụkwa ihe yiri ya.
Nhọrọ mbụ bụ ụda vidiyo nke ga-ebudata ngwa ngwa na nke abụọ bụ vidiyo zuru ezu nke ga-ewe obere oge. Ọ bụrụ na vidio ahụ dị otu awa, adala mbà n’ihi na ọ ga-ewe ogologo oge ibudata ya kpamkpam.
Dika anyi gwara gi dabere na ogologo nke vidiyo anyị ga-echere karịa ma ọ bụ obere oge, ma n'ọtụtụ oge na sekọnd ole na ole ma ọ bụ na ọtụtụ oge anyị ga-enweta vidio ahụ anyị chọrọ iji budata. Ozugbo usoro nbudata ahụ gwụchara, anyị ga-ahụ ihe dịka nke egosiri na foto na-esonụ;
Iji mechaa usoro nke nbudata vidiyo YouTube ọ bụla site na OffLiberty anyị ga-ahọrọ usoro anyị chọrọ, na MP3 iji budata naanị ụda ma ọ bụ vidiyo iji budata vidiyo ahụ na ụda gụnyere. Dabere na folda ị jikọtara na nbudata na ihe nchọgharị gị, faịlụ ahụ ga-aga otu ebe ma ọ bụ ọzọ.
Obi abụọ adịghị ya ohere ndị OffLiberty na-enye anyị na-atọ ụtọ Ma ọ bụ na ọ bụghị n’oge ole na ole anyị chọrọ ibudata vidiyo YouTube iji nwee ike ịchekwa ya ruo mgbe ebighị ebi. Ọzọkwa na m ikpe m na-eji ngwá ọrụ a ọtụtụ ugboro na-enwe ike ibudata songs na-ege ntị na kọmputa m, ọ bụ ezie na n'elu ihe niile m ji ya na-enwe ike ịzọpụta ndụ songs ma ọ bụ zuru ezu concerts na ọtụtụ ndị na-edekọ na ha mobile igwe na mgbe ahụ ikwusi na ọrụ.
N'ezie, ọ dịghị onye kwesịrị ikwere na nke a bụ naanị usoro iji budata vidiyo ma ọ bụ faịlụ ọdịyo na YouTube, ebe enwere ọtụtụ ndị ọzọ, ọ bụ ezie na nke a bụ ikekwe ụzọ kachasị mma iji budata vidiyo site na ọrụ Google. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmata ụzọ ndị ọzọ, echefula nke anyị ndu ibudata vidiyo YouTube site na ngwaọrụ ọ bụla.
You nwetụla mgbe ị jiri OffLyberty mee ihe budata vidiyo YouTube ogologo?. Ọ bụrụ na azịza ya bụ ee, gwa anyị banyere ahụmịhe gị na ngwa ọrụ a. Na mgbakwunye, anyị ga-ahụkwa gị n'anya ịgwa anyị ihe ọrụ ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ ị na-eji ibudata vidiyo YouTube. You nwere ike ịgwa anyị na oghere edebere maka ikwu na post a ma ọ bụ site na otu n'ime netwọkụ mmekọrịta ebe anyị nọ.
Budata vidiyo na EaseUS MobiMover Free
Nhọrọ ọzọ na-adọrọ mmasị ibudata vidiyo na ngwaọrụ ọ bụla na site na ebe ọ bụla bụ iji EaseUS MobiMover Free, dị ike free video Downloader na i nwere ike iji na ma Windows na Mac na ibudata na nyefee videos mfe na comfortably.
Download vidiyo na naanị 2 nzọụkwụ
Kwụpụ 1: Pịa na menu Ihe nbudata vidiyo na taabụ mmanya na họrọ ngwaọrụ nke ịchọrọ ibudata vidiyo na ya.
Kwụpụ 2: Tinye URL nke vidiyo ahụ ị chọrọ ibudata na pịa na bọtịnụ ibudata. Ozugbo ịpịrị bọtịnụ ahụ, sọftụwia ahụ ga-amalite nbudata vidiyo ị gosipụtara wee nyefee ya na ngwaọrụ ị họrọ, bụrụ ekwentị gị, mbadamba ma ọ bụ otu kọmputa ị na-eji.
Ọ bụrụ n ’ị matara nhọrọ ndị ọzọ iji budata vidiyo YouTube, hapụ anyị nkọwa gị na nhọrọ ọzọ ị họọrọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » OffLiberty, budata vidiyo ogologo na youtube
Ndi OffLiberty enwerela?
ọ naghị arụ ọrụ m offlberty gịnị ka m ga-eme ọchị
enwere n'efu ???
Ọ naghị arụ ọrụ ọzọ, ọ ga-akwụ ụgwọ?
Ma ọ naghị arụ ọrụ
Ọ D NOGH L ỌR WOR NA ỌR AS KA TUPU ... Ọ NA-EWETA ogologo oge
n'ezie ọ naghị arụ ọrụ ọzọ ihe mere
emepezịghị peeji ahụ
Ha nwere ike chekiar
Ihe na-eme site fiss
hụrụ ya n'anya dijo
Ọ dị ezigbo mma, anyị nwere olile anya na ị ga na-emelite ya, daalụ
Zaghachi luis h lopez
Edin Zuñiga… Daalụ maka ụdị ngwaọrụ a magburu onwe ya iji budata vidiyo
Zaghachi Edin Zuñiga
Enwere m iPhone 6 .. Amaghị m ebe a na-echekwa egwu ebudatara
Download onye njikwa faili ị ga-ahụ ya ebe ahụ
Ami ase oge k agaghi aputa na flexita i nyere ya ma oga alaghachi na offliberty dika na mbido mana o naghi ejide ibudata egwu onye obula ma o buru na o mere?
Ndewo, ehihie ọma, achọrọ m ịma ihe kpatara ibe anaghị ekwe ka m budata abụ ọ bụla, m detuo url ma ọ naghị enye m ohere ibudata, ọ na-ekwu nwalee ọzọ ọ naghị akwụsị, adị m otu a ruo ọtụtụ ụbọchị
Ọ dị m ka YouTube emeela mgbanwe nche, na mgbakwunye na imewe, ma tinye ụfọdụ weebụsaịtị nbudata maka ọdịnaya ya, gụnyere Offliberty.
AJ ISJ THE B IS Njikọ XQ QuIET NA M enweghị ike ịmatakwu egwu ọzọ na-enweghị iwu.
Ọ D ME M AKA BOG NT PRKWU NDP ỌBPR,, MA M B BER BE NKP FEWTA NT WEKỌ MGBE Ọ D LGH ME KA M KWEE ABORD MA Ọ B VID VIDIO. EKPERE M KWURU GI KA INYERE MADU.
BỤGHỊ Ị BỤ ỤLỌ.
Usoro ihe omume a arụghị ọrụ m kemgbe izu ole na ole, gịnị ma ị zaghachi ihe m kwuru?
Nke a bụ email sitere na ọrụ ọrụ OffLiberty: kọntaktị@offliberty.com
Anyị bụ ozi na nkuzi weebụsaịtị, anyị enweghị ihe jikọrọ ya na ụlọ ọrụ na-ejikwa weebụsaịtị a.
Ọ bụrụ na mmemme a dị mma mana ọ bụ ụbọchị m enweghị ike ibudata egwu a, kedụ ihe kpatara ya, daalụ nke ukwuu
ihe banyere offliberty– ọ naghịzi arụ ọrụ….
ndị jaimitrus dijo
Kedu maka mmemme, ọ naghị enye m ohere ibudata ihe ọ bụla. onye maara uzo ozo ibudata na mixcloud
mgbede ọma ;
Nchegbu m bụ ihe na-esote ihe mere bụ na ngwa arụbeghị ọrụ izu abụọ ma hụ ihe kpatara ya n'ihi na ọ dị ka ọ dị mma ịhụ ụzọ azịza gị
Zaghachi nye leidys montero chacon
Nyere akwukwo aka adighi aru oru, o dikwa nma na anyi choro enyemaka ...
Omeela izu ole na ole kemgbe ọ na-ahapụ m ibudata egwu ma ọ bụ vidiyo, nke a ga-aga n'ihu ịme biko. Azịza
Ndewo, aha m bụ Yamila, enweghị m ike ibudata egwu, gịnị na-eme n'ihi na enweghị m ike ibudata egwu?
Zaghachi Erica yamila
Exlente dị oke ọsọ
ehihie ọma achọrọ m ịma ihe mere na mmemme a ma ọ dịghị azaghachi ma ọlị ụzọ enweghị ike ibudata egwu ma mmemme a kachasị mma iji ụbọchị nyere m aka ịza azịza gị.
Zaghachi Henry Quezada
Peeji nke gafere anaghị arụ ọrụ
Ọ naghị arụ ọrụ ọzọ
Enweghị ike ibudata egwu ọzọ?
Enwere m olileanya na ha nwere ike idozi okwu ahụ ... ha maara nke ibe ọzọ ibudata egwu
Ọ bụ mmemme dị oke mma, mana ihe dịka otu afọ gara aga, ọ kwụsịla nbudata ihe ọ bụla ma ọlị. Ezigbo ihere, n'ihi na ọ bụ ihe kachasị mma mgbe enwere nbudata ihe omume.
Ekele dịrị ndụ na nnupụisi bụ ndị nyere m ihe niile.
Zaghachi Nicasio Sanoja Palma
Eji m mmemme a, mana oge ụfọdụ a na m etinye address nke ụfọdụ egwu ọ na agwa m na url ahụ anaghị arụ ọrụ nwa oge: Achọrọ m ibudata abụ site na ndekọ abora ma ọ bụ sọsọ na-ebuli elu. na peeji ndị ọzọ nke a na mbụ, mana enwere m nsogbu ahụ na njedebe.
Sony na-ebuli ọnụahịa nke PlayStation Plus na obodo na-ewe iwe
Twitter ka anaghị ebuli isi ya